Global Voices teny Malagasy » ‘Ilay Andro Nahalasa Ahy Ho Tarehimarika Adaladala’: Ny Dian’ny Siriana Iray Mpialokaloka Ho Any Eoropa · Global Voices teny Malagasy » Print
‘Ilay Andro Nahalasa Ahy Ho Tarehimarika Adaladala': Ny Dian'ny Siriana Iray Mpialokaloka Ho Any Eoropa
Voadika ny 21 Jona 2016 15:07 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Alemaina, Hongria, Serbia, Syria, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Ny Tetezana - The Bridge
Tato anatin'ny taona roa,betsaka no efa nosoratana momba ireo mpitsoaponenana. Saingy zara raha misy no rentsika tena avy amin'ny vavan'ireo mpitsoaponenana mivantana fa tsy hoe notantaraina. GlobalPost, fikambanana iraisampirenena iray mampita vaovao ao anatin'ny fianakaviamben'ny PRI, dia nangataka lahatsoratra andrana avy aminà Siriana tanora dimy izay samy nandray fanapahankevitra sarotra handao ny tany niavian'izy ireo — ka nanatanteraka dia lavitr'ezaka iray hivoaka ny firenena, ho any Tiorkia, Gresy ary manerana an'i Eoropa atsimo.
Ity fitantaràna ity, avy amin'i Zozan Khaled Musa, 25 taona, dia nivoaka voalohany tao amin'ny  PRI.org tamin'ny 31 May 2016, ary naverina navoaka etoana rehefa nahazoana alàlana.
Taorian'ny dia lavitr'ezaka nanjombona teny an-dranomasina Aegean, tonga tao amin'ny nosy kely Grika antsoina hoe Nera aho, ny maraina mamirifirin'ny 3 Oktobra 2015 tokony ho tamin'ny 3:00 . Feno mpanjono maro avy ao an-terana teo, izay nanampy anay taorian'ny niantsonan'ny sambo. Ny milina manosika ny sambo no nirian'izy ireo ho azo, izay sarobidy ho azy ireo.
Tena fitoniana tsy nampino izany hoe nahita ny tongotray nandia tany izany indray. Nanapaka hevitra ny hitoetra taminà trano kely iray nanakaiky ny morontsiraka izahay. Tsy ampy ho an'ny rehetra ilay efitrano. Araka izany ny zaza amam-behivavy no nipetraka tao anatiny. Ny entako no nataoko ondana ary ny akanjo ho lamba fitafy, saingy nangatsiaka loatra ny andro ka tsy nahavita nanakimpy ny masoko aho. Rehefa nangiran-dratsy, nandeha namonjy ny paositry ny polisy teo an-toerana izahay. Tokony ho efatra kilaometatra niala avy eo.
Maro ny sambo tonga niantsona teo amin'ilay nosy kely iny alina iny. Anjatony ireo olona nitsangana nitandahatra niandry ny anjarany mba ho voarakitra ho afaka mandray ny sambo hafa manaraka ka hamonjy ilay nosy lehibe Kos. Tao Nera, rehefa tonga ny anjarako hiditra ao anatin'ny birao, nosoratan'izy ireo teo amin'ny tanako ny tarehimarika “17”. Tsy ho adinoko velively izay andro izay, nahatonga ahy ho tarehimarika adaladala tao anatin'ny lisitra lavabe tsy misy izay maha-olona. Henatra toy inona ho an'ny zanakolombelona izany hoe olona betsaka lasa tsy heverina ho olona tao anatin'ny fotoana tokana tsy nahafahany nanoatra izany. Narahako antsakany sy andavany araka izay azoko natao ireo dingana rehetra ary dia nitodi-doha ho any Kos aho, toerana niandrasan'ireo manampahefana anay niaraka tamin'ny taratasy nisy ny anaranay tsirairay avy nisoratra tao anatiny. Taratasy nanome alàlana anay handray sambo ho any Athenes izay taratasy izay. Dia naharitra ora 12. Tonga tany Athenes aho ny ampitso maraina ary nandeha namonjy ny fianakavian'ny naman'ny vadiko sy nihaona taminà Grika iray namana nanampy ahy handray fiara fitaterambahoaka ho any amin'ny sisintany Makedoniana. Tamin'ny 11 ora alina tamin'izay.
“Tao Nera, rehefa tonga ny anjarako hiditra ao anatin'ny birao, nosoratan'izy ireo teo amin'ny tanako ny tarehimarika “17”. Tsy ho adinoko velively izay andro izay, nahatonga ahy ho tarehimarika adaladala tao anatin'ny lisitra lavabe tsy misy izay maha-olona.”
Tamin'ny 6 ora maraina aho no tonga teo amin'ny sisintany. Somary nifamaly kely tamin'ilay mpiambina aho satria tsy rariny ny nataony. Efa niandry fotoana ela teo ny olona sasany, saingy nalefany nialoha azy ireny ireo vao tonga. “Toa sorena sy misaritaka ianao izany. Raha tianao, afaka mandeha miverina mankany amin'ny firenenao ianao ary mijanona any,” hoy izy tamiko. Tsy nety nangina aho, saingy namana iray no nanao izay hampitony ahy. Ny maha-mpitsoaponenana na voa an'ady ahy tsy midika velively fa tsy maintsy mangina aho rehefa tsy mety ny fomba fitondra ahy. Nandao an'i Siria aho tsy hoe haka ny volan'i Eoropa na ny tombontsoa arabolany. Nandositra aho noho izao tontolo izao ninia sy lasa jamba tampoka teo, marenina ary moana manoloana ny loza manjo ny maha-olombelona mihatra aminay ao Siria.
Nandoa 25 euros ($27) isan'olona izahay mba hiondrana tanaty korontamby lazain'izy ireo fa fiarandalamby. Tsy misy teny afaka mamaritra ny loto sy ny fofona tsy hay zakaina tao anatiny. Avy eo, rehefa nafatratra tao ny olona rehetra, toy ny mitety atody ny fandehany. Izany no fomba filazanay tany Siria ny zavatra milantolanto sy mihisina. Saingy tonga tany amin'ny sisintany Serbiana ihany nony farany. Teo aho vao naniry ny tsy hanombohana ity dia lavitr'ezaka ity. Niainako ny zavatra ratsy indrindra taorian'ny nandehanana an-tongotra ela be, efa ho enina kilaometatra, hamonjy ilay tanàna voalohany izay nisy ny foibe fisoratana anarana. Tsy tsaroako ny anaran'ilay tanàna. Reraka loatra aho tamin'izay. Nefa iriko ny hahafantatra ilay izy mba hilazàko amin'izao tontolo izao ny haratsiany. Noheverina ho toerana hahafahan'ny olona miala sasatra tao. Saingy navela teny an'arabe ireo mpitsoaponenana ary minitra vitsy monja no navela hiditra mba hanoratra ny mombamomba azy an-taratasy sy ho lasa tarehimarika vaovao indray. Nanohina ny nahita ireo olona an'aliny miandry sy mifanositosika, ary ny fomba ratsy itondràn'ireo polisy Serba azy ireo. Zavatra tsy irinao hiainana velively mihitsy raha tsy hoe tena efa tsy mahita hiantorahana intsony ianao. Ny olona sasany tafahaona tamiko tao nilaza fa efa ela be ry zareo no natory teny an'arabe niandry izay taratasy fanoratana anarana izay.
Tsy misy zavatra mifanaraka amin'ny saina na ny maha-olona ny dia tahaka izany.
Taorian'ny fiandrasana nahavery fanantenana, nifankahalala taminà Serba iray mpanao gazety aho. Vehivavy nahafinaritra izy ary nanampy ahy ho tafiditra haingana. Nanampy ahy mihitsy aza izy hahazo fahazoandàlana handray ny fiara fitaterana ho any Kroasia tao anatin'ny ora vitsy mba hahafahako mahita tontolo iray hafa mihitsy, izay hafa mihitsy ny fitondrantenan'ireo olona tany. Nahita tena olombelona manam-pitserana aho. Tena olona feno fanajàna tanteraka ry zareo. Nomena dite mafàna aho ary navela hiala sasatra. Iny andro iny ihany dia nandray ny fiarandalamby nankany Hongria. Teny ambonin'izay fiarandalamby izay, mba nahazo tory aho nony farany.
Tao Hongria, tsy nahita na inona na inona aho satria andro alina no nahatongavako ary avy hatrany dia nandray fiarandalamby indray. Saingy hitako ny fefy vy vaovao manasaraka ny sisintaniny amin'i Kroasia, izay nakatona taorian'ny herinandro monja nahatongavako tao Alemaina. Varavarana iray hafa nikatona teo anoloan'ireo mpitsoaponenana. Tao anatin'ny ora vitsy dia tonga tao Vienne aho, Aotrisy. Nandany ny alina tao aminà toerana fanaovana fihaonana ara-panatanjahantena aho, izay navadika ho toerana ho an'ireo mpitsoaponenana. Natory toy ny hoe tsy mbola nisy toy izany aho iny alina iny, na dia banja malalaka afaka ahitàn'ny olona rehetra anao aza ny tao.
Ny maraina, nandeha nankany amin'ny toby fiantsonan'ny fiarandalamby aho ary namandrika tapakila ho any Alemaina. Tena natahotra tokoa aho hoe ho voasambotra ao Passau, ilay tanàna ao Alemaina amin'ny sisintany iraisany amin'i Aotrisy. Naniry mafy ny hahita ny vadiko aho, izay efa tany Alemaina. Teny an-dàlana, tsy niteny na dia voanteny Arabo iray aza aho mba tsy hahafantaran'ny olona fa mpitsoaponenana. Nifanojo taminà Amerikàna aho teny ambony fiarandalamby. Mpizahatany ry zareo. Nifampiresaka kely tamin'izy ireo momba ny diany aho. Noresahanay koa ny momba ny mpitsoaponenana. Tsy faly tamin'izy ireo mihitsy ilay ramatoa. Tsy nisy nahafantatra mihitsy izy roa hoe mpitsoaponenana anie aho raha tsy efa tonga tany amin'ny sisintany. Nahita polisy Alemà iray niakatra tao anaty fiarandalamby aho. Nakimpiko efa ho antsasakadiny ny masoko. Nody natory aho. Nefa henoko tsara ny zavatra nitranga tao, fotoana iray toa tsy hanam-pahataperana. Nosamborina sy navoaka ny fiarandalamby ireo mpifindra monina sy mpitsoaponenana. Ho ahy, angamba ny fahafahako miteny Anglisy vitsivitsy sy ny tsy nitafiako ‘hijab’ — nitafy izany daholo ny ankamaroan'ireo vehivavy hafa — no nanampy ahy tsy ho tratra.
Rehefa nikatona ny varavaran'ny fiarandalamby, nisento tokana aho. Nosokafako ny masoko ilay avy nanao nody natory iny mba hijery avy eo am-baravarankely ireo ankizy , vehivavy sy lehilahy anjatony — tanora sy antitra — nijoro nitandahatra voahodidin'ireo polisy. Izany no zavatra niainako voalohany tao Alemaina. Faly aho satria afaka nisosa tsy nanahy, saingy tsy tsara ny nahita ireo olona tsy nanan-kianteherana tery ivelany toy ny hoe mpanao heloka bevava, indrindra fa ireo izay tsy naniry ny hijanona tao Alemaina. Niezaka naka an-tsaina ny nanjo azy ireo aho. Tena mahavaky fo rehefa ilay ianao mahita ny sasany mitopy any aminao aminà fomba hafa izay, mihevitra anao ho tonga noho ny fahantràna. Izany no ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona rehefa mahita ny teny hoe “mpitsoaponenana”.
Vadin'i Yilmaz i Zozan. Monina any amin'ny tanàna kely iray ahitàna mponina eo amin'ny 5.000 eo any andrefan'i Alemaina izy ankehitriny, manakaiky an'i Pays-Bas. Tsy ela akory izay izy no voaantso hiatrika tafatafa tao amin'ny biraon'ny fifindràmonina. Avy eo izy dia tsy maintsy hiandry ny fankatoavana ny fahazoany fahazoandàlana hipetraka mandritry ny telo taona. Avy eo ho afaka hikisaka ho any Berlin, hiara-hitoetra amin'ny Yilmaz vadiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/21/83933/
 nivoaka voalohany tao amin'ny : http://www.pri.org/stories/2016-05-31/becoming-refugee-essays-syrians-living-germany